Uma ngaphambili ukuba siqu ekhaya lakho iholidi kungenzeka baphupha kuphela, manje uyithenga ngeke izinkinga. Ngaphezu kwalokho, ngaleso sikhathi mhlaba ubhekwa elite. Ngesikhathi esifanayo kokusuka kulelo dolobha ukuze izakhamuzi Megalopolis, ikakhulukazi inhlokodolobha, - inzuzo. Abantu bakhathele abahlala edolobheni elikhulu, wadalula ukucindezeleka njalo. Basondela nemvelo, eduze komfula nehlathi. Indlu edolobheni baye eside ahanjiswe esuka esigabeni 'ocebile' e-ingxenye etholakalayo. Futhi zonke sibonga yokuthi baqala esizokwakhiwa cottage emizaneni ekilasini umnotho. Lesi sakamuva asisebenzi kwi-CP "Gardens Vyazemskys" kusukela "ZemAktiv".
Le nkampani usebenza emakethe kusukela 1999. Uhlobo eyinhloko umsebenzi wayo - ukuthengiswa komhlaba kanye izakhiwo elalizokwakhiwa e Cottages yayo kanye cottage zokuhlala. "ZemAktiv ngawo ukuthi 'usebenza ingxenye yesigaba umnotho, onikeza unjiniyela ikhono ukusetha izintengo eliphusile. Le nkampani usebenza ezindaweni ezimbili - eba ezweni elise Simferopol futhi Novorizhskoe onguthelawayeka. Ikotishi Village "Vyazemskys Gardens" isezingeni Simferopolskiy isiqondiso amakhilomitha 63 kusuka eMoscow. "ZemAktiv" has suburban ingcebo market kuyinto ngempela idumela ezithile, kubhekwa umakhi okuthembekile, yinhlonipho.
Mayelana Simferopol onguthelawayeka
Eminyakeni emihlanu eyedlule, kwakubhekwa njengesenzo elite Simferopol isiqondiso. Ngomqondo onabile, kusenzima ingenye ohlonishwa kakhulu suburban ingcebo market. Nokho, nemizana ngaphambili lapha ezakhiwa kuphela premium ukuthenga indlu ezingase kuphela abantu kakhulu, mkhulu kakhulu. Kushintshe ini? Kuphela Muscovites izinto eziza kuqala. Kuze kube manje, ibanga amakhilomitha 60 ngabo akubhekwa isizathu ngenxa yokwenqaba ukuthenga indlu libe liqhele kangaka kusukela enhlokodolobha. Lokho kubanika, ivumela onjiniyela ukuhlola ephansi-izindleko umhlaba edolobheni, ukwakha nemizana abenzele bonke comers izindlu ezingabizi futhi isakhiwo iziza. Phela, njengoba wazi, ukubeka endaweni eMoscow nendleko ngokoqobo isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu, lapho izwe yesifundazwe impela ezingabizi.
Ikotishi Village "Vyazemskys izingadi", njengoba sekushiwo, itholakala Simferopol onguthelawayeka. Ngokucacile - ku Serpukhov wesifunda. Ngo-2012, ukuthengiswa komhlaba Holdings, futhi isigaba sokuqala amakhaya. Ingqikithi - 127 iziza. Kuze kube manje, ke kudayiswa 60% Holdings. Ngo 2013 uqedwe isigaba yesibili yomsebenzi wokwakha ngo-2014 - eyesithathu. Cottage "Gardens Vyazemskys" zithengiswa izwe isakhiwo njengoba inkontileka, noma ngaphandle kwalo, kanye iziza izindlu ngomumo eyenziwe. Leli dolobhana lizungezwe ihlathi, budebuduze ke ageleze emfuleni Lopasnya futhi Nara. Wonke amasayithi anemisila ngezidingo, ngakho-ke awukwazi ukuphila kuphela ehlobo kodwa unyaka wonke.
Noma yimuphi umthengi izwe ingcebo izithakazelo bezikhali nezindaba ezibalulekile eziningana, Omunye angase athi ngisho ezibalulekile. Lokhu emvelweni esifundeni, ingqalasizinda kanye zokuhamba yayo link. Yikuphi ndlela kuyaqondakala ngoba umnikazi ngamunye endlini emijondolo cottage akafuni ukulahlekelwa uxhumene edolobheni (okuningi kwasala umsebenzi), afuna ukuhlala endaweni ongisekelayo ukufinyelela izinto eziyinhloko kwengqalasizinda kanye nezohwebo. Yini kafushane bese utshele.
Serpukhov wesifunda lulonke lusesimweni zezemvelo ezahlukene ezinhle. Ikakhulukazi amabhizinisi ezinkulu ezimbonini ayikho lapha, kodwa eziningi amahlathi kanye amadamu zemvelo. Ngaphezu kwalokho, indawo reserve Oka-masimu ku insimu yalo. Njengoba la emzaneni uqobo, "Vyazemskys izingadi", lapha ungakwazi ngempela ukujabulela ubunye nemvelo, ngokuba thina kumele ngincome unjiniyela. Umthuthukisi ibahlomisé iyatholakala ku "Gardens" echibini, lolwandle wabaphakamisa Nara, ngokuletha manje kukhona ngempela ehloniphekile lolwandle, watshala lime avenue. Ngaphezu kwalokho, eduze nomzana kukhona ihlathi, kwezinye izindawo, ngasendleleni, ukufinyelela ehlathini.
Simferopol onguthelawayeka nakuba kubhekwa khona umgwaqo omkhulu zanamuhla ezithwele kakhulu. Nokho, njengazo zonke imigwaqo azungeze eMoscow. Noma kunjalo izimo izingadi bakule ndawo 'Vyazemskys' bayothola ekuseni kusihlwa kuphela. Emini eMoscow engafinyelelwa e isigamu sehora, ukuthi izindinganiso dolobha akuzona okungaka. Zikhona izindlela. Lokhu Kaluga futhi Warsaw imizila. A ibanga ukwandisa kancane, kodwa isikhathi, ngenxa yokugcwala at motorways, cishe akukho ukulahleka.
Kutholwe amakhilomitha amahlanu kusukela "Vyazemskys izingadi" isiphetho Sharapova has w / esiteshini d ku Kuzminki emzaneni (2 km) - esitobhini sebhasi.
Esitolo esiseduze itholakala emzaneni iholide "Sosnovka Park", 10 km kusuka "Garden" kuyinto esitolo "Metro", udinga ukuthenga okuningi ngesikhathi n. Yesigaba sabasebenzi (3 km), kanye ngqo Serpukhov esithatha imizuzu engu-20 kude. Kukhona unayo yonke ingqalasizinda yomphakathi - .. Gardens, izikole, izibhedlela, Pharmacy, njll Kukhona isikole kanye lena yesigaba sabasebenzi. Ngaphezu kwalokho, lesi sifunda has a lot of ezikhangayo emlandweni futhi yokwakha, nesithukuthezi ngakho eholidini nje abanalo.
Njengoba "Vyazemskys izingadi" ayatholakala kwi Izibuyekezo cottage, bonke abakhileyo kulo ucabanga ukuthi ingqalasizinda kwabahambela aphila kahle.
On ukudayiswa kwesabelo endaweni kusukela 7,94 kuya 31,75 aluka. Kusukela namuhla, ungakwazi ukuthenga noma yiziphi izindawo Vending njengoba low ruble 935.389 ukuze 5.047.631. Intengo kuhlanganisa ngaphezu phansi axhunyiwe nezokuxhumana kanye ezicijile futhi wamaphepha. Lokhu okuthiwa iziza ngaphandle inkontileka. Umnikazi, abathenge zaba, ungaqhubeka wakha indlu bebodwa noma ufune usizo enkampanini, ezizohlinzeka for imali eyengeziwe, yebo, ochwepheshe kanye nezinsizakalo phrojekthi.
Kungenzeka ukuthenga futhi ukudayiswa nendlu kakade wakha. Lesi sakamuva kungaba lokhuni noma isidumbu noma izitini zikasimende. Indaba kusukela eyakha isakhiwo kuncike izindleko zawo. Lesi sakamuva ngokwesilinganiso amabili kuya kwamahlanu (noma ngaphezulu) ezigidi ruble.
Namuhla cishe wonke umsebenzi engadini igcwaliswe. Into kuphela ukuthi ukukwenza - kuyinto ukuvula isitolo sezinto. "Gardens Vyazemskys" - a ukuthuthukiswa elibiyelwe ukuthi ilungele ngokuphelele eziphilayo. Lapha kukhona zezingane namadlelo ezemidlalo, futhi ifakwe ibhayisikili imizila nezindawo abahlezi, ngisho yokudlela. Ukungena endaweni ifakwe CAT, lonke ipherimitha uthango ifakiwe, video ukubhekwa amakhamera afakiwe. Kukhona yokupaka isivakashi.
Yini abantu bathini mayelana KP "Vyazemskys Gardens"
Ikotishi Village izibuyekezo ezivela abaqashi ukuthola, isimiso, hhayi kabi. Wonke umuntu uthanda indawo yayo, abaningi bathi eMoscow kuyinto kolwesiNgisi, ngaphezu, labo abanikazi abahlala lapha unomphela ekhaya, vele bejwayele ukusebenzisa ingqalasizinda izindawo Serpukhov. Abanye baze onjengawo, ngoba amanani imikhiqizo, izimpahla kanye nezinsizakalo lingaphansi kakhulu kunasendaweni enhlokodolobha. Zonke ukudumisa inkampani ukuphathwa, okuyinto ukhathazekile njalo mayelana nesimo imigwaqo nokulungisa igceke. Abantu abaningi abahlala KP "Vyazemskys Gardens" sikubheka njengempahla indawo esikhulu, hhayi nje iholidi iholide, kodwa futhi zokuphila. Benefit kwezokuxhumana olwenziwa nokuthi kusebenza ngokungenaphutha.
Kukhona ezimbi mayelana nekhwalithi izindlu ezakhiwe yinkampani, abanikazi ngezinye izikhathi ukuthola kuzo ngenxa yezici zokungapheleli. Nokho, unjiniyela ngokushesha yonke efanele. Ngakho, isimiso, inketho kuhle. Yini ibuye kufakazelwa iqiniso lokuthi KP "Vyazemskys Gardens" kuthatha indawo 16 kule simo nemizana Simferopol onguthelawayeka.
UVladimir Population: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
"I bangena phakathi ehlathini, ifaka izinkuni eziningi." Inani futhi izaga
Yelaphani ngoba Alcoholism: intengo, ukubuyekezwa, ukusebenza kahle, incazelo
Yiziphi amalungelo umthengi